Ugxeke ukucwasa nengcindezelo osule esiteshini sezindaba – LIVE Express
Lowo obeyintatheli yesiteshi sikamabonakude sezindaba, i-eNews Channel Africa (eNCA), uPhakamile Hlubi, usesole lesi siteshi ngokucwasa ngokwebala kanye nengcindezelo athi idla lubi ngaphakathi kusona.
Lokhu kuvele encwadini evulelekile (open letter) uHlubi ayibhalele ozakwabo kanye nabaphathi kwa-eNCA kulandela ukusula kwakhe.
Kule ncwadi, uHlubi usole abaphathi abaphezulu be-eNCA kanye nebhodi lalesi siteshi ngokubanqabela njengabasebenzi ukuthi babumbe uhlaka oluzolwela izimfuno zabasebenzi.
“Bakubeka kwacaca ukuthi noma yiluphi uhlaka olulwela amalungelo abasebenzi ngaphakathi alwamukelekile,” kusho uHlubi.
Uthi ngenxa yomzabalazo wabo, i-e Media yaphoqwa u-CCMA ukuthi ingene ezingxoxweni ne-Communication Workers Union okukuqala ngqa emlandweni wayo.
“Sasiphoqwa ukuthi sisebenze kunomuzwa wokwesaba kanye nokusatshiswa. Labo abasukumela amalungelo abo bathuliswa ngokuthi bahlukunyezwe, noma kwenziwe imizamo yokubanqinda ukuze bashiye.
“Njengeziko lezindaba, asinalo ilungelo lokugxeka uMengameli Jacob Zuma ngokuhluleka ukuvikela uMthethosisekelo uma nathi sinecala ngento efanayo.
“Asikwazi ukuthi siyiziko lezindaba ‘elizimele’ uma abantu abasebenza lapha bejeziswa ngokukhuluma,” kuqhuba uHlubi.
Uqhube wathi ziseningi izinkinga kulesi siteshi, okubalwa kuzo ukungabi khona koguquko, ukucwaswa ngokwebala nokungalingani kwamaholo abasebenzi abenza umsebenzi ofanayo.
Kuzokhumbuleka ukuthi i-eNCA isanda kuba sezindabeni kulandela enye incwadi eyabhalwa yintatheli yayo, uNontobeko Sibisi, eyibhalela ozakwabo, nalapho ayezwakalisa khona ukungenami kwakhe ngesinqumo sabaphathi balesi siteshi sokukhipha emoyeni udaba ayelucoshele mayelana ne-Africa Day, ngenxa yokuthi lwaqoshwa egqoke idukwe.
uMhleli wezindaba omkhulu kwa-eNCA, Anto Harber, waziphika lezi zinsolo wathi ayikho inkinga ngokugqokwa kwedukwe.
u-Harber uphinde wacashunwa kwi-City Press eziphika izinsolo zokucwasa ngokwebala kulesi siteshi wathi incwadi kaHlubi yakha isithombe sokuthi i-eNCA igubuzelwe ukucwasa ngokwebala, ukuxhashazwa kwabasebenzi kanye nokumelelana nezinyunyana zabasebenzi.
Image: Phakamile Hlubi Facebook page